"Hulu video si na ndepụta okwu?
M bụ ike ibudata a Hulu video ke ọkọlọtọ-def, ma ọ ga-ibudata ndepụta okwu? Ọ bụ na Japanese na English ndepụta okwu. Onye ọ bụla ike na-eme nke a? "- RootCat
Unu onwe unu kwa na-achọ oké ngwá ọrụ dị ka rootCat aka download ndepụta okwu si Hulu tinyere videos? Lee dịghị ihe ọzọ ga-ahụ oké otu ebe a. The Wondershare AllMyTube for Mac e mere ibudata videos na ndepụta okwu si Hulu. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike tọghata Hulu videos na na na obere ngwaọrụ. Chọrọ ego ya ugbu a? Ka anyị hụ ihe zuru ezu nzọụkwụ n'okpuru.
1 Wụnye AllMyTube na gị Mac
Download a ndutịm esonụ njikọ na wụnye ya na gị Mac. Mepee omume mgbe nwụnye ma na-onwe gị familiarized na ya.
The Mac Version na-adịghị arụ ọrụ ma ọ ga-emelitere na August
2 Chọta Hulu videos-amasị gị
Gaa Hulu ịchọta videos-amasị gị. Pịa video na-egwu na ego ma ọ nwere ndepụta okwu. Ị nwere ike ịhụ ọtụtụ videos iji kwadebe maka nbudata.
3 Download Hulu videos na ndepụta okwu
E nwere ụzọ atọ ibudata videos.
Otu bụ site ikpuru-na-dobe. Dị nnọọ ịdọrọ na dobe URL nke video ka isi window nke usoro ihe omume na ọ ga-amalite iji nyochaa na ibudata na video na ndepụta okwu.
Ụzọ ọzọ bụ na ịpị Download bọtịnụ nke ga-egosi na n'elu aka nri nke video ihuenyo. Nke a ga-videos na ndepụta okwu ebudatara ke otu ụzọ.
Nke atọ nhọrọ bụ idetuo url nke video na pịa Paste URL bọtịnụ. Ị nwere ike tinye dị ka ọtụtụ videos dị ka o kwere ka usoro ihe omume na o nwere ike na-akpaghị aka na-arụ ọrụ na ndabere na ibudata 5-10 videos n'otu oge.
Ugbu a Hulu videos na ndepụta okwu na-ebudatara gị na kọmputa. Ị nwere ike gaa Na n'ọbá akwụkwọ na usoro ihe omume iji mezie pịa video ma họrọ Gosi na Finder na-elele video na sobtaitel faịlụ na kọmputa gị. Na-egwu video on obere ngwaọrụ, i nwere ike iji tọghata Hulu videos mbụ. Pịa tọghata bọtịnụ na nri nke video na Na Ọbá akwụkwọ na họrọ a usoro. Pịa OK iji na-enweta video converted na aka nyefee videos gị obere ngwaọrụ.
Ike na-eche ka a na-agbalị ugbu a? Dị nnọọ aga n'ihu ma na-amalite na-enwe Hulu videos ke laa.
Olee otú Download Videos si Internet
> Resource> Download> Olee otú Download Hulu ndepụta okwu